.မြန်မာပြည်ရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ အမှတ်မထင်ဆုံတွေ့ခွင့်ရလို့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့သြဝမ်းသာခဲ့တဲ့ Sinon Loresca. – Askstyle
.မြန်မာပြည်ရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ အမှတ်မထင်ဆုံတွေ့ခွင့်ရလို့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့သြဝမ်းသာခဲ့တဲ့ Sinon Loresca.
ျမန္မာပရိသတ္ေတြသာမက ကမာၻအရပ္ရပ္က ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္ၿပီးသား ဖိလစ္ပိုင္ Catwalk Model Sinon Loresca က လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သံေယာဇဥ္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ေတာင္ရွိေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Sinon Loresca က ျမန္မာႏိုင္ငံက ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနသလို သူခ်စ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးက ေနရာေဒသအႏွံ႔မွာ အလႉအတန္းေတြ ျပဳလုပ္ရင္း ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Sinon Loresca ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာေမြးဖြားသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို အရမ္းခ်စ္တတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကိုခ်စ္သလို ျမန္မာအႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ဆုံေတြ႕မႈေတြကိုလည္း ဂုဏ္ယူတတ္တဲ့ Sinon Loresca က ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ထိပ္တန္းမင္းသမီး ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္နဲ႔ ဆုံေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ မွ်ေဝေပးလာပါတယ္။ Sinon Loresca က “Myanmar မွာ အားက်စရာအေကာင္းဆုံး မင္းသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ Amazing Feelings အရမ္းခ်စ္တယ္ ‘’ Wutt Hmone Shwe Yi ‘’ ” ဆိုျပီး ေျပာလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Sinon Loresca ကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ ကမၻာသိတဲ့ ဆယ္လီ၊ အနုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က ထိပ္တန္းမင္းသမီး ဝတ္မႈံေရႊရည္နဲ့ ဆံုေတြစဥ္မွာ အတိုင္းမသိဝမ္းသာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ဝတ္မႈံေရႊရည္နဲ့ Sinon Loresca တို့ရဲ့ ဆံုေတြ့မႈကိုၾကည့္ျပီး အားက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
မြန်မာပြည်ရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ အမှတ်မထင်ဆုံတွေ့ခွင့်ရလို့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့သြဝမ်းသာခဲ့တဲ့ Sinon Loresca
မြန်မာပရိသတ်တွေသာမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ပရိသတ်တွေ ချစ်ပြီးသား ဖိလစ်ပိုင် Catwalk Model Sinon Loresca က လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်အချိန်တောင်ရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Sinon Loresca က မြန်မာနိုင်ငံက ကြော်ငြာတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသလို သူချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးက နေရာဒေသအနှံ့မှာ အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ရင်း ပျော်ရွှင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sinon Loresca ကတော့ မြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးတွေကို အရမ်းချစ်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေကိုချစ်သလို မြန်မာအနုပညာရှင်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့မှုတွေကိုလည်း ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့ Sinon Loresca က ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေပေးလာပါတယ်။ Sinon Loresca က “Myanmar မှာ အားကျစရာအကောင်းဆုံး မင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့လိုက်ရသောအခါ Amazing Feelings အရမ်းချစ်တယ် ‘’ Wutt Hmone Shwe Yi ‘’ ” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Sinon Loresca ကတော့ သူကိုယ်တိုင် ကမ္ဘာသိတဲ့ ဆယ်လီ၊ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်က ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ ဆုံတွေစဉ်မှာ အတိုင်းမသိဝမ်းသာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ Sinon Loresca တို့ရဲ့ ဆုံတွေ့မှုကိုကြည့်ပြီး အားကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။